सुर्केडाँडा आधारभूत विध्यालय वाम्राङमा पहिलोपटक पक्की भवन बन्दै
रमन वन, आषाढ ११,खोटाङ,दिक्तेलरुपाकोटमझुवागढी नगरपालिका वडा नं.३ वाम्राङस्थित सुर्केडाडा आधारभूत विध्यालयको दुइकोठे पक्की भवनको आज शिलन्यास भएको छ ।
नगरपालिकाबाट विनियोजित वजेट रु २० लाखबाट निर्माण हुने आरसिसि भवनको आज नगरप्रमुख दिपनारायण रिजाल तथा उपप्रमुख विणादेवी राईलेसंयुक्त रुपमा शिलन्यास गर्नुभएको हो ।
सुर्केडाडा अधारभूत विध्यालयको हाल एउटा पुरानो जिर्ण भवन र २ वटा सामान्य भवन रहेकोमा पहिलोपटक पक्की भवन बन्न लागेकोमा शिक्षक तथा अभिभावकहरु हर्षित बनेका छन् ।
तर सबै कक्षाका विध्यार्थीहरु धुलौटे वातावरणबाट मुक्त हुन अझ एउटा पककी भवनको आवश्यक्ता रहेको प्र.अ. सूर्यबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । विध्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वमबहादुर पाण्डेको अध्यक्षतामा सामाजिक दुरी कायम राख्दै भएको शिलन्यास कार्यक्रममा वडा नं. ३ का वडा सदस्यहरु दिल चाम्लिङ, हिरा परियार तथा स्थानीय अभिभावकहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यो भवन आगामी अशोजभित्र सम्पन्न गरिसक्ने प्रअ थापाले बताउनुभयो ।